...avadikay ho boky
Ny tantarao no fototra hiaingana. Anjaranay, Mpanoratra Tantarampiainana no mandridra ny voalazanao antsoratra. Ny tanjona dia ny hampitana antsoratra ny fomba fitataranao ny fiainanao.
Mila fiheritreretana lalina ny mamory ny tadidy sy ny hevitra. Mba ahamora ny fomba fiasa na ho anao na ho anay dia ho raisina ampeo ny tantaranao. Iny fandraisampeo iny, dia mamampy tokoa rehefa mila teny na hevitra manokana hitantarana zavatra lehibe tamin’ny fiainanao.
Rehefa vita ny fiainona dia raikitra ny fanoratana. Ny tanjona dia ny ahafan’ny mpamaky mahalala avy hatrany hoe tantaranao no ao anatin’ilay boky (fomba fiteny, fitantara, teny fampiasa...). Araka ny voalaza etsy ambony dia ny fandraisampeo no ahafahana manao izany.
Mandroso amin’ny alalan’ny fahaiza manokana ny Scribes miaraka amin’ny fomba fiasa manaraka ny toetr’andro : avadika soratra amin’ny solosaina ny tantaranao. Raha ny mahazatra dia atao manaraka ny fotoana (taloha manantona ny ankehitriny) ny fomba fitantarana mba tsy ahavery ny mpamaky. Nefa kosa misy fomba hafa ahafana mitantara ny fiainanao (ankehitriny miverina amin’ny taloha...)
Rehefa hekenao ny hamohana ny boky dia hisy fanatotana ny “bon à tirer”. Iny no fanandramana ahalalana raha manaraka ny fangatahinao ny zavatra misy ao anaty boky (soratra sy sary). Raha misy ny fanamboarana dia eo no ahitsy ny tsy mety.
Rehefa vita izay dia manao fantahina eny amin’ny mpamokatra boky na “imprimerie” ianao. Azon’ny Mpanoratrao atao ny manampy anao hitady mpamokatra boky. Raha sendra misy mpanantonta boky liana amin’ny tantaranao dia mety ho malaza herakin’ny mpivarotra boky ny bokinao...sarotra anefa ny milaza hoe tsy maintsy hisy izany !! Saingy izao no hitranga, hitombo avy hatrany ny fifankatiavanao sy ny fifankazonao amin’ny olona akaikinao nohon’ny bokin’ny tantarampiainanao. Rehefa hitan’ny mpamaky ny tantaranao dia hiova fijery izy satria ahazava aminy ny zavatra niainanao, ny toetsainao, ny ao amponao.